Himalaya Dainik » कस्तो बिडम्बना ! पैसा नभएपछि लाश जलाउन पनि नपाइने
सहरमा सन्नाटा छ, राष्ट्रपतिदेखि सर्वसाधारण, करोडपतिदेखि सुकुम्बासी कोरोनाको ‘नजरबन्द’मा छन् । मान्छेले घुम्न छाडे, काम गर्न छाडे, कतिपयले भोकै पनि छाक टारे । तर, टार्नै नसकिने मृ’त्युले मान्छेलाई कसरी घुँडा टेकाउँछ, हामीले शनिबार पशुपति आर्यघाटमा देख्यौँ ।
उनीहरूको पीडा के हो ? हामीले चासो राखेपछि संवाद लम्बियो । उनीहरूले हामीलाई बागमती किनारतर्फ लगे । किनारमा एउटा श’व देखियो । छेउमा थिइन्– २७ वर्षीया रिना श्रेष्ठ र रुँदै गरेका दुई बच्चा ।
यसको बिस्तृत समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा दाहसंस्कारमा ‘नो डिस्काउन्ट’ शीर्षकमा टेकराज थामिले लेखेका छन् ।